Toamasina – Akon’ny fety: sivy maty, 13 naiditra hopitaly | NewsMada
Toamasina – Akon’ny fety: sivy maty, 13 naiditra hopitaly
Par Taratra sur 03/01/2020
Fety tsy nieren-doza ny tao Toamasina. Nitombo ny isan’ny maty raha oharina ny tamin’ny taon-dasa nandritra ny fetin’ny faran’ny taona sy ny taom-baovao teo. Maro ihany koa ireo naratra nandalo fizahana sy niditra hopitaly.
Niakatra ny isan’ny maty fa nihena kosa ny naratra naiditra hopitaly nandritra ny fankalazana ny fetin’ny faran’ny taona sy ny taom-baovao teto Toamasina, araka ny tatitra voaagona tamin’ny dokotera Zafimila Alphonse, tomponandraikitra ao amin’ny Hopitaliben’i Toamasina. Araka ny antontanisa voaray, miisa 158 ny olona nandalo fizahana maika ka ny 13 tamin’ ireo no tsy maintsy naiditra hopitaly. Miisa sivy kosa ny maty ka ny 7 tamin’ ireo dia olona efa tsy misy aina avy any ivelany no nentina tao amin’ny sampana vonjitaitra. Nisy ny maty an-drano ary teo koa ny niharan’ny tombok’ antsy sy tratran’ny lozam-pifamoivoizana teo Ankirihiry. Ny iray kosa maty efa teny amin’ny efitranon’ny hopitaly nitsaboana azy noho ny fahaverezan-dra be loatra vokatry ny ady ary ny fahasivy dia tao Morafeno, tovolahy 28 taona, matin’ny fisotroan-toaka tafahoatra. Amin’ny ankapobeany, 24 naratra vokatry ny ady ka ny 7 tamin’ ireo naiditra hopitaly, efatra noho ny lozam-pifamoivoizana, iray vokatry ny asa ary 6 ny fianjerana amin’ny lalanasy tany an-tokantrano ka ny iray no naiditra hopitaly. Efatra ny tsy nahatsiaro tena vokatry ny hamamoana.Tsy nisy kosa ny fanapoizinana ara-tsakafo.
Tsy ampy ny fanafody ampiasaina
Nampimenomenona ny olona ny tsy fahampian’ny fanafody nampiasaina nandritra ny vaninandro fety teo. Nanazava anefa ny dokotera fa tsy maharaka ny fanafody fampiasa amin’ny vonjitaitra ka lasa mitrosa any amin’ny fivarotam-panafody ny sampana vonjitaitra mba hanavotana ireo marary.
Etsy andaniny, nandritra ny fanaovana fanadihadiana teny an-toerana no nahalalana fa betsaka ny ankizy marary, izay voan’ny aretin-kibo sy fivalanana. Raha ny fanazavana dia vokatry ny loto miparitaka manerana ny tanàna sy ny rano mihandrona danihin’ny hafanana ambony be ka tsy zakan’ny vatan’ny ankizy ny mahatonga izany.